स्केटेबल अनुप्रयोगले तपाइँको फोनलाई स्केटबोर्डमा बनाउँछ
by स्टीव गुफा
स्केटेबल एक चुनौतीपूर्ण स्केटबोर्डिंग खेल हो, जहाँ तपाईको आईफोन तपाई स्केटबोर्ड हो। सोफेमा आराम र प्ले सुरु गर्न, तपाईंको फोन स्पिन जस्तै स्केटबोर्ड थियो। किकफ्लोप्स, हेल्पलिप्स, ट्रे फ्लिपहरू, हामीले यो सबै प्राप्त गरेका छौं। तपाईंका चालहरू एक-एक द्वारा स्क्रिनमा देखा पर्दछ। जबसम्म तपाईं असफल भएपनि तपाई स्केट लाइन गर्दै हुनुहुन्छ। सबै भन्दा राम्रो स्केटलाइनहरू प्राप्त भए, एक पंक्तिमा 15 वटा ट्रिपहरू गर्न तपाईंले माइक मो अवार्ड पाउनुभयो।
तपाईले गरिरहनु भएको सबै चालहरू एकत्रित गरिन्छन् र तपाईंले प्रोभेस ट्याबमा आफ्नो प्रगतिको निरीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ।
मैले Wojtek, स्केटबल निर्माता, आफैले र एपका बारेमा केहि प्रश्नहरू सोधें, उनलाई जान्न र उनको काम अझ राम्रो गर्न:
1. मलाई आफ्नो स्केटबोर्डिंग संग आफ्नो पृष्ठभूमि को बारे मा बताओ
मैले दस वर्षको हुँदा मैले मेरो पहिलो स्केटबोर्ड पाएको छु र म पछि देखि स्केटबोर्डिङ भएको छु (म 23 हुँ)। जब म जवान थिएँ, मैले धेरै स्केट गर्थे र मैले सधैँ मेरो अन्य शौक, कम्प्यूटरको साथ बाँड्न खोजेको छु। मेरो किशोरी वर्षमा मैले स्केट समाचार वेबसाइट र हाम्रो चालक दल होमपेज बनाएको छु। अब, म धेरै ठूलो शहरमा बस्ने छु, त्यहाँ धेरै महान स्केटबोर्डर्सहरू छन्, तिनीहरूसँग स्केटिङ गर्नको लागि अति उत्कृष्ट छ। मैले सकेसम्म सडकमा बाहिर जान खोज्छु।
2. सम्पूर्ण APP बनाउनको लागि तपाईं कसरी जानु भयो ?!
एक दिन म मेरो साथीसँग चिन्तित थिएँ, र उनीसँग मेरो फोन फ्लिप गर्ने यो आदत छ कि यो स्केटबोर्ड थियो, मसँग पनि छ।
मैले सोधे कि यो एप्स बनाउन को लागी चालहरु को पहिचान गर्न सक्छ र हामीलाई SKATE Easier खेलन को लागी गरौं तब तब गरे, तर यो डिजाइन को लागी र प्रोग्रामिंग को केहि महिना को लागि तैयार थियो, स्केटेबल 1.0।
3. यो एप बनाउन मनपर्छ? के वास्तवमा कडा कडा छ, वा यसको बारे सजिलो छ? के हो चुनौती छ?
यो धेरै रमाइलो छ। मलाई प्रोग्रामिङ र स्केटबोर्डिंग मनपर्छ र स्केटेबलको लागी धन्यवाद छ। कठिन भाग निश्चित रूप देखि ग्योस्कोप्रो डेटा को विश्लेषण र स्केटबोर्ड चाल को रूप मा वर्गीकृत गरियो। मैले भनेँ- "मैले भनेँ," मैले भनेँ, "म तिम्रो साथीको घरमा जान्छु। यसका लागि उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईदिनु भएको छ। यसका बारेमा जानकारी गराईएको छ। तपाईले तपाईलाई थाहा पाउनु भएको छ।
त्यसोभए, स्केटेबल के हो?
स्केटेबल एक अभिनव स्केटबोर्ड सिमुलेटर हो। आफ्नो उपकरण घुमाउनुहोस् र
अनुप्रयोगले कुन कुरालाई स्केटबोर्ड ट्रिक भनिरहेको छ। त्यहाँ 100 देखि अधिक फरक छ
चालहरू जुन अनुप्रयोगले पहिचान गर्दछ। स्केटबोर्डर्स, स्नोबोर्डर्सर, औंलार्डर
र सर्फर्स - हामी सबैले हाम्रो उपकरणलाई एक बोर्डको रूपमा कल्पना गर्दैछौं
यसको साथमा मौसम परिस्थितिले हामीलाई स्केट गर्न अनुमति दिँदैन। यसलाई मार्न दिनुहोस्
स्केटयोग्य आईफोनको पहिचान गर्न पर्याप्त स्मार्टफोनको पहिलो अनुप्रयोग हो
रोटेशन र तिनीहरूलाई स्केटबोर्ड ट्रिक्सको रूपमा अनुवाद गर्दछ। यो पहिलो वास्तविक सिमुलेटर हो।
Skateable SKATE गेम नियमहरू जान्दछन् र तपाइँ यसलाई तपाइँसँग खेलौं
एक खेलाडीले उनको विशेष स्केटबोर्डिंग चाल गरेर एक चाल सेट गर्छ
छनौट। यदि चाल ल्याईएको छैन भने, अर्को प्लेयरले चाल सेट गर्न कोसिस गर्दछ। एक पटक
एक चाल सेट गरिएको छ, अन्य खेलाडीले एकै चाल गरेर प्रतिक्रियाको जवाफ दिनुपर्छ
उनीहरूको पहिलो प्रयासमा। प्रत्येक असफल प्रतिक्रियाको लागि, प्लेयरले "S", "K" प्राप्त गर्यो,
"ए", "टी" वा "ई" (कति चालहरू उनीहरूले भूमिमा असफल भए, क्रमशः)।
एक खेलाडीले "ई" प्राप्त गरेको एक अन्तिम प्रयास छ। यदि रक्षात्मक स्केटबोर्डर
पुनरुत्थान चाल छैन, त्यो खेल गुमाउँछ।
• धेरै स्केटबोर्ड फ्लैट ट्रिक्स जान्छ
• फ्रिराइड मोड
• Multiplayer SKATE खेल
• गफ र नियमित समर्थन
• रंगीन बोल्ट संग्रह
• प्रो स्केटर बन्ने प्रगति
App Store http://appstore.com/Sable
एप वेबसाइट http://skateableapp.com हो
शीर्ष नि: शुल्क अनलाइन स्केटबोर्डिङ खेलहरू
टोनी हकको परियोजना 8 संगीत साउन्डट्र्याकमा के छ?
स्केट3धोखाधड़ी, कोडहरू र उपलब्धिहरू
शीर्ष6स्केटबोर्डिङ खेलहरू
मिस स्प्रिन्ट कप कसको थियो?
गोल्फ गिप्सका विभिन्न प्रकारहरू सिक्नुहोस्
डलास क्यूब्स चेयरलिस्टहरू भेट्नुहोस्
भाइ बनाएर भाइ एनएफएलमा? त्यहाँ तिनीहरूका छन्
यो पढ्नु अघि पहिले काटी नगर्नुहोस्
बच्चाहरु को लागि एक परिचयात्मक समूह आइस स्केटिंग पाठ मा अपेक्षा को लागी
काली मिर्च र जल विज्ञान जादुई चाल
नेपोलियन युद्धहरूको समयमा लग्गीको युद्ध
इन्ज मिलहोल्यान्ड बोसेभेन
हूडिंग को परिभाषा (द क्लब)
बिल महिर उद्धरण
6 विद्यार्थीहरू नकली समाचारलाई स्पट गर्न मद्दत गर्ने तरिका
डरलाई सही दृष्टिकोण लिन्छ
संयुक्त राज्य अमेरिका वन को मानचित्रहरु को कवर को प्रकार - उत्तरी अमेरिका मा ट्री रेंजहरु
पढाईको विस्तृत: सामाजिक मिडियाको संक्षिप्त इतिहास
जीवनी र हुबस्टैंकको प्रोफाईल
यूसुफ माइकल स्वाङ्गोको प्रोफाइल
महिमित क्रांति: ग्लेन्कोओ नरसंहार
पढ्न सम्भावना संवादहरू
वेगा स्टार तथ्य - हाम्रो भविष्य उत्तर तारा
पूर्ण-समय विद्यार्थी के हो?
चट्टान र खनिजहरूको विशिष्ट प्रकारहरू कहाँ पत्ता लगाउँछन्